ဆားဗီးယားနိုင်ငံခရီးစဉ် ဟန့်တားပိတ်ဆို့ခံရခြင်းအတွက် အနောက်နိုင်ငံများအား ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပြစ်တင်ရှုတ်ချ - Xinhua News Agency
၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန် ၆ ရက်တွင် ပြုလုပ်သည့် အွန်လိုင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Sergei Lavrov က ရှင်းလင်းဖြေကြားနေသည်ကို တီဗီဖန်သားပြင်မှ တဆင့်တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
မော်စကို ၊ ဇွန် ၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Sergei Lavrov က ဆားဗီးယားနိုင်ငံ ဘဲလ်ဂရိတ်မြို့သို့ ဦးတည်ပျံသန်းသော ၎င်း၏ လေယာဉ်ခရီးစဉ် ဟန့်တားပိတ်ဆို့ခံရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဆားဗီးယားပတ်ပတ်လည်ရှိ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၏ “ မထင်မှတ်ထားသော ဆုံးဖြတ်ချက်များ” အပေါ် ဇွန် ၆ ရက်တွင် ပြစ်တင်ရှုတ်ချ လိုက်သည်။“ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ မိတ်ဖက်ရွေးချယ်မှု လွတ်လပ်ခွင့် ၊ အနောက်နိုင်ငံတွေက ကျင့်သုံးတဲ့ မူဝါဒကို သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီး နင်းခြေပစ်လိုက်ကြတယ် ။ အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ ရှုထောင့်ကနေကြည့်ရင်တော့ ဆားဗီးယားမှာ အဲဒီလွတ်လပ်ခွင့် ရှိမနေပါဘူး ” ဟု အွန်လိုင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ဝန်ကြီး Lavrov က ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုသို့ဟန့်တားပိတ်ဆို့သော လုပ်ရပ်သည် ရုရှားနိုင်ငံနှင့်ဆားဗီးယားနိုင်ငံ၏ ဆက်ဆံရေး ထိခိုက်ပျက်ပြားစေရန် နှင့် ဆားဗီးယား၏ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကို ကန့်သတ်ရန် ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း Lavrov က က ဆိုသည်။
ကရင်မလင်နန်းတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Dmitry Peskov က နေ့စဉ်ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားရာ၌ ရုရှားအဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်များအား ဦးတည်သည့် “ရန်စသောလုပ်ရပ်များ” နှင့် ရုရှား နှင့် ယင်း၏မိတ်ဆွေနိုင်ငံများအကြား အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုတွင် ဆားဗီးယားဖြစ်စဉ်မျိုးကဲ့သို့ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်း ဝေဖန်ပြောကြားခဲ့သည်။
ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Lavrov သည် ဇွန် ၆ ရက် မှ ၇ ရက်အထိ ဆားဗီးယားနိုင်ငံ ဘဲလ်ဂရိတ်မြို့သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ရန် စီစဉ်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ လေယာဉ်သည် ဆားဗီးယားပတ်ပတ်လည်ရှိ နိုင်ငံများ၏ လေပိုင်နက်ထဲသို့ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ရန် ငြင်းဆန်ဟန့်တားခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Maria Zakharova က တနင်္ဂနွေညပိုင်းတွင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။(Xinhua)
Lavrov criticizes West for blocking his visit to Serbia
MOSCOW, June6(Xinhua) — Russian Foreign Minister Sergei Lavrov on Monday denounced the “unprecedented decisions” by countries surrounding Serbia to close their national airspace for his flight to Belgrade.
“A country’s freedom of choosing partners,aprinciple upheld by the West, has been trampled on by the West itself. Serbia, from the point of view of the West, should not have such freedom,” Lavrov said at an online press conference.
Lavrov said the incident was an attempt to undermine Serbia’s relations with Russia and restrict its foreign policy.
During his daily briefing, Kremlin spokesman Dmitry Peskov slammed the “hostile actions” toward high-level Russian representatives and stressed that interactions between Russia and friendly countries like Serbia would continue.
Lavrov was planning to visit Belgrade from Monday to Tuesday. His plane was denied entry into the airspace of the countries surrounding Serbia, Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova said Sunday night.
Photo – Screengrab of official footage shows that Russian Foreign Minister Sergei Lavrov speaks during an online press conference on June 6, 2022
Shenzhou-14 အာကာသယာဉ်မှူးများ Tianzhou-4 ကုန်တင်အာကာသယာဉ်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်